Alaabada Eyga Shiinaha ee loo yaqaan 'Plush Dog Toy' Qalabka Ciyaaraha Lagu Sameeyo Oo La Qayliyo Ihome
Caruur Ey Caruus Ah Oo Loo Sameeyo Qalabka Ciyaaraha Squeaky Waxyaabaha Lagu Calaliyo Dameer
Tilmaamaha Astaamaha Dameeraha alaabta carruurtu ku ciyaaraan eeyaha ee xiisaha badan, 3 dameer oo go'an! Ka samaysan bey'ad-saaxiibtinimo, la dhaqi karo, isla markaana lagu daray premium. Alaabta lagu ciyaaro eeyaha dheeriga ah ayaa kaa caawin doona inaad ilaaliso ciridka eeygaaga oo aad nadiifiso ilkaha. Waad iska ilaalin kartaa eeyahaaga si ay u calaashadaan alaabta gurigaaga ama kabahaaga. Eyga quruxda badan ee quruxda badan oo loogu talagalay midabyo dhalaalaya iyo muuqaal dameer dhalaalaya, waxay si weyn u soo jiidayaan eeyahaaga oo ay ku maaweelinayaan! Qeexitaannada Midabka: Cawl / bunni / Waxyaabaha Dhexdhexaad ah: Dareer + Cabbirka Cotton: 24cm * 19cm Culayska alaabada: 30 ...
Dameeraha caruusadaha eeyaha ciyaaya ee xiisaha badan, 3 dameero oo go'an! Ka samaysan bey'ad-saaxiibtinimo, la dhaqi karo, oo lagu daray qiimo jaban. Alaabta lagu ciyaaro eeyaha dheeriga ah ayaa kaa caawin doona inaad ilaaliso ciridka eeygaaga oo aad nadiifiso ilkaha. Waad iska ilaalin kartaa eeyahaaga si ay u calaashadaan alaabta gurigaaga ama kabahaaga. Eyga quruxda badan ee quruxda badan oo loogu talagalay midabyo dhalaalaya iyo muuqaal dameer dhalaalaya, waxay si weyn u soo jiidayaan eeyahaaga oo ay ku maaweelinayaan!
Midabka: Cawl / bunni / Dhexdhexaad
Waxyaabaha: Dhar + Cudbi
Cabir: 24cm * 19cm
Miisaanka alaabta: 300g / 0.66lb
1. Intaa waxaa dheer, waxaan sii wadi doonnaa inaan cusbooneysiino badeecadeena si xilliyeed ah si aan u sii wadno inaan fiiro gaar ah u yeelano horumarkii ugu dambeeyay ee la xiriira eeyaha oo aan u siino eeyo caafimaad leh alaab caafimaad leh Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
2. In ka badan 10 sano, waxaan bixinay boqolaal alaab xayawaan ah, oo siinayna saad ku filan iibsadayaasha xayawaanka ee dalal kala duwan oo adduunka ah. Waxaan u qaabeyneynaa badeecadaha si aan ugu fiirsano caafimaadka jirka iyo maskaxda labadaba. Waxaan fiiro gaar ah u leenahay Wararkii ugu dambeeyay ee caafimaadka xayawaanka, waana sii wadi doonaa cusbooneysiinta alaabada xayawaanka xilliyada qaarkood. Haddii aad rabto wax caawimaad ah, fadlan nala soo xiriir.
3. Laga soo bilaabo alaabta carruurtu ku ciyaaraan ilaa qalabka nadiifka ah ee xayawaanka, Waxaan ku siineynaa dhammaan badeecadaha aad ugu baahan tahay astaan ​​- IHOME. IHOME waa koox diiradda saareysa qiiro iyo horumar. Saaxiibbadeenna kooxeed dhammaantood waa kuwa jecel eyga, oo waxay jecel yihiin inay eeyaha ilaashadaan. Waxaan xafiisyada ku haynaa eeyo si ay nooga caawiyaan inaan tijaabino alaabooyin cusub mararka qaarna waxay noqdaan dhiirrigelinteena qaabeynta alaabooyin cusub, taasi waa sababta aan si sax ah ugu siin karno milkiileyaasha xayawaanka sahayda xayawaanka ay u baahan yihiin.
4. IHOME ahaan waxaan ku faaneynaa heerkeena sare ee daryeelka macaamiisha. Laga soo bilaabo marka aad booqato boggayaga amarka la bixiyey, waxaan bixinaa adeeg hal-hal ah oo ku siinaya talo iyo adeeg shaqsiyeed. Waxaanan balanqaadeynaa in dhamaan su'aasha looga jawaabi karo 24 saac. Wixii su'aal ah, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.
5. IHOME waxaa loogu talagalay inay bixiso waxyaabo gaar ah oo ku habboon dhammaan baahiyaha eyga jecel. Dhammaan walxaha ku yaal bogga ayaa si gaar ah loogu doortay shaqadooda, raaxeysiga, qaabkooda, nabadgelyadooda iyo tayada dabcan. Ka sokow, waxaan qorsheyneynaa inaan cusbooneysiinno xilli-xilli si aan uga dhigno kuwa raaxo leh oo aan kaa dhigno inaad ku raaxaysato nolosha eeyo faraxsan, caafimaad leh, firfircoon.
6. Laga soo bilaabo qalabka hurdada ilaa waxyaabaha madadaalada banaanka, IHOME waxaa ka go'an inay siiso xayawaannada noocyo kala duwan oo alaab ah labadaba baahiyo jireed iyo baahi nafsiyeed, caawinta xayawaannada si ay ugu raaxaystaan ​​nolol raaxo leh, farxad leh, caafimaad leh, iyo nolol firfircoon.
7. Xubnaha kooxda IHOME waxay lamid yihiin xubnaha qoyska, oo ay kujiraan eeyaha xafiiska. Waxaan isku dayeynaa inaan u ekeysiino nolol maalmeedka milkiilayaasha dhabta ah iyo xayawaankooda, si aan u ilaalino baahida eeyaha xaalad kasta, iskuna dayno sida ugu fiican ee aan ku qancin karno. Waxaan soo saarnaa alaab eyda u isticmaali karaan marka milkiiluhu wada joogo, laakiin sidoo kale marka mulkiiluhu aanu guriga joogin. Waxaan iskudayeynaa sida ugufiican ee aan ula kulanno baahiyaha nafsiyeed iyo jireed eeyaha xaalad kasta. Haddii aadan ka heli karin badeecada aad u baahan tahay liiska alaabtayada, waad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta oo jawaabtaada waxaa lagu jawaabi doonaa 24 saacadood.
8. Howlgalka IHOME
Hadafkeenu waa inaan la kulanno baahida maskaxeed iyo baahida jireed ee xayawaanka, waxaan ka dhigi karnaa xayawaankaaga caafimaad qaba, faraxsan, oo tamar buuxda leh. Waxaan aaminsanahay in xayawaankaaga guriga ay muhiim u yihiin sida qoyskaaga oo kale!
Jacaylka eeyaha ayaa ku jira dhiiggeenna. Waxaan u aragnaa xayawaanka raba inay xubin ka yihiin qoys kasta sidaa darteed waxaan ku dadaalnaa inaan fulino baahidooda.
Hore: TPR Puppy Chew Toys Qalabka Eeyaha Yar Yar Ilmaha Nadiifinta Nadiifinta
Xiga: Qalabka Animal Plush Dog Toy wuxuu Sameeyaa Qalabka Ciyaarta ee Cunista shimbiraha
TPR Ey cunaa Alaabta Yar yar ...
Keeg Cuno cunista eey Toy S ...
Squeaky Plush Dog Calalinta Toy ...
Animal Plush Dog Toy Calan Sq ...
3 Xidhmo Baako Cunto ...
Ey Cunto Toy Elepant Plush ...